प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिमानीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना - Sidha News
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिमानीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला दान दिन भाञ्जी समीक्षा संग्रौला ज्ञवाली टिचिङ अस्पताल पुगेकी छन् । डोनरलाई पनि स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नु पर्ने भएकाले संग्रौला पनि अस्पताल पुगेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीकी भाञ्जी पनि आजैदेखि अस्पताल भर्ना हुनेछन् । त्यसका लागि उनी अस्पताल पुगिसकेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । नातामा भान्जी पर्ने समिक्षाले ओलीलाई मिर्गौला दिने तयारी गरिएको र उनको जाँच समेत यसअघि नै गरिसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिनेको आइरो लागेको छ । देशको सरकार प्रमुखकै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिन लागेको र प्रधानमन्त्री ओलीमा इच्छाशक्ति भरपूर भएकाले पनि धेरैले शुभेच्छा प्रकट गरेका हुन् ।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । आज प्रा डा प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दैछ ।
यसैक्रममा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी छन् । उनले बुधबार बिहान सामानिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर राख्दै स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी हुन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पीएमनेपाल सफल मृगौला प्रत्यारोपण र शिघ्र स्वास्थ्यलाभको शुभकामना साथै मृगौला प्रत्यारोपण पूर्ण रुपले सफल होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु ।’
बोलिभियाका राष्ट्रपतिसहित ७ मन्त्रीलाई कोरोना पुष्टि
युवाहरुले एकताबद्ध नेकपाको निम्ति पहल गरौँ !
भारतले राजाको पालामा सार्वजनिक गर्न नसकेको नक्सा कुन आँटले अहिले सार्वजनिक गर्यो ?
मनिषा र सरिता, यताकी छोरीले यतैको गाइन, उताको छोरीले उतैको
दलित भएर अझै कति समय बाँच्नु पर्ने हो ?
८४ ब्यन्जन नपचेर भुँडी फुट्ने नेता भन्दा तपाईं प्यारो लाग्न थाल्यो पूर्वराजा : वरिष्ठ पत्रकार बानियाँ
मन्त्री ज्यु, यो पाप तपाईले रुद्री चन्डी सप्ताह वा तुलादान जे गरे पनि तपाईको सात पुस्तालाई पोल्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन
कोरोना भाइरसलाई हराएका डिबालाको कोरोना अनुभव
चीनमा २ हजार पर्ने कोरोना जाँच गर्ने उपकरणलाई ७ हजार मूल्य राखेर टेण्डर पास गर्न नपाउँदा औषधि र उपकरणहरुको खरिदमा ढिलाई